Waa maxay sababta Barcelona Loogu garaacay saxiixa David Alaba xili ay baahi weyn u qabtay? | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Sports Waa maxay sababta Barcelona Loogu garaacay saxiixa David Alaba xili ay baahi...
Waa maxay sababta Barcelona Loogu garaacay saxiixa David Alaba xili ay baahi weyn u qabtay?
Real Madrid ayaa u muuqata mid ku guuleysatay tartanka xidaga daafaca ugu ciyaara Bayern Munich ee David Alaba, kaas oo dhawaan uu dhici doono qandaraaskii uu kula jiray kooxda Bayern.
Hayeeshee kooxda Barcelina ayaa si dhow ula socotay xidiga reer Austria. Waxaana ay dhowr jiir xariiro kala duwan la sameysay wakiilka xidigaani oo lagau magacaabo Pini Zhavi kaas oo horay dhowr kooxood ugu bandhigay saxiixa Alaba.
Barca waxa ay isku deyday in ay xidiga ka dhaadhiciso in ay keento Magaalada Barcelona balse markii ay ka war heshay qiimaha heshiiskiisa dhanka mushaarka ayay ka gacmo taagatay taasoo Real madrid u fududeysay in ay si dhib yar kula heshiiso xidagaan boosaska badan ka ciyaara.
Kabtanka kooxda Real madrid Sergio Ramos oo isna qandaraaskiisu uu dhacayo sanadkaan bisha June, da`ahaana jira 34 sano ayay Real Madrid u diyaarisay in ay booskisia ku buuxiso Alaba, halka inta uu joogana ay dooneyso in ay tartan la geliso xidagah Ferland Mendy iyo Raphael Varane.
Madaxweynaha la rajeynayo in uu la wareego kooxda Barcelona ayaa doonayay in qorshihiisa uu qeyb uga dhigo David Alaba kaas oo uu doonayay in u u gor gortamo maadaama kooxdo ay u baahantahay xidig daafac ah oo xirfad sare leh.
Si weliba Wargeyska Marca ee kasoo baxa Madrid waxa uu qoray in caqabada ugu weyn ee hor istaagtay Barcelona ay tahay dhaqaalaha xidiga uu qaadan doono Sanad weliba kaas oo ah mid aysan bixin Karin waqtigaan oo kooxda dhaqaalaheedu uu saameyn ku yeeshay Xanuunka Karoona.
Mohamed Abd Nahar.
Previous articleDowladda Britain oo danjire cusub u magacowday Soomaalia.
Next articleGabadheyda oo yar ayaan dayacay, 16 sano kaddib nafteyda ayey badbaadisay’